पोखराको सेती नदिबाट आयो डरलाग्दो खबर, प्रहरी नै परे चकित – हेर्नुहोस भिडियो सहित – Rabin's Blog
Buletin Post June 23, 2018 समाचार	0
पोखरा । पोखराको महेन्द्रपुलबाट एक व्यक्ति हाम्फालेर बेपत्ता भएका छन्। महेन्द्रुलपुल नजिकैकी एक महिलाले पुलको जाली क्रस गरेर हाम्फाल्न लागेका एक पुरुषलाई पछाडीबाट देखिन् तर मानिस को थिए स्पष्ट देख्न सकिनन्।
उनले देखेको केही सेकेण्डमै मानिस सेतीमा बजारीएको आवाज आयो। उनले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरिन तर अहिले सम्म हाम्फालेका मानिसको पत्तो छैन्। पोखराको चर्चित पुल महेन्द्रपुलबाट हाम्फालेका उनी को थिए र सेतीको खोंचबाट कहा पुगे त्यो सम्म पनि खोजी टोलीले पत्ता लगाउन सकेको छैन।
महेन्द्रपुलमा बिहानभर खोजेपछि उनेको कुनै संकेत फेला परेन। उनी खसेको ठाउँमा कुनै ठूलो दाग छैन, कुनै कपडा तथा अड्कलबाजी गर्ने कुनै संकेत समेत उनले छोडेनन्। सिधै सेतीकोको साँघुरो खोंचमा पुगे कता गए–गए।महेन्द्रपुलमा उनको कुनै पत्तो नलाएपछि खोजी टोली तुल्सीघाटमा पुग्यो। नेपाल प्रहरी, शसत्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीयबासी सबै मिलेर खोजि कार्य तिब्र पारिएको थियो।
तुल्सीघाटमा पुग्दापनि मानिसको पत्तो लागेन तर हाम्फालेका मानिस पोखरा महानगरपालीकाका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल भएको आशंका गरे । भीडमा जम्मा भएका मानिसहरु भन्दै थिए, घटनाको प्रकृती र अवस्था हेर्दा ओमराज सरसँग मिल्छ । बिहान मर्निङवाक हिँडेका ओमराज यो समाचार तयार पार्दा सम्म सम्पर्क बिहिन छन्।
उनको फोन घरमै थियो । उनले जुन रंगको कपडा लागाएर मर्निङवाक हिँडेका थिए त्यही रंगको कपडा लगाएको व्यक्ति नै हाम्फालेको प्रत्यक्ष देख्ने महिलाले बताएकी छन्। सेतीको पानि सेतो भएकाले र खोंचहरु साँधुरो र जान समस्या पर्ने देखिएकोले खोजी कार्यमा समेत समस्या परेको छ।
अशोक दर्जीले जब ठुलो प्लेनभित्रै चर्चित गीत सुनाएर एयरहोस्टेजमात्रै हैन यात्रुलाई समेत मनोरञ्जन दिलाए (भिडियोसहित)
भारतीयले फेरि दिए नेपालीलाइ दुख ! अघोषित रुपमा नेपालि मालगाडीलाइ यस्तो दुख दिदै
भर्खरै आयो सबिलाई चकित बनाउने खबर ! हेर्नुहोस यो ४ वर्षको बच्चाको शक्ति , तपाई दंग पर्नुहुन्छ